Tiếng Việt / မြန်မာဘာသာ | covid19-labourQ&A
Hỏi Đáp Q&A
Liên Quan đến Vấn Đề Lao Động bị ảnh hưởng bởi Virut Corona Chủng Mới
Hiệp Hội Luật Sư về Lao Động Nhật Bản
Đây là bản tóm tắt dưới dạng hỏi đáp “Q&A” về những vấn đề trong lĩnh vực lao động bị ảnh hưởng bởi dịch cúm chủng loại mới mang tên Corona (ở đây chúng tôi dùng thuật ngữ virut Corona chủng mới)。
Nếu công việc của bạn bị ảnh hưởng bởi virut chủng loại mới Corona xin hãy tham khảo bảng tóm tắt này.
Điều quan trọng cần nhớ đó là đừng ôm nỗi lo lắng đó một mình nhưng hãy liên lạc với luật sư hoặc liên đoàn lao động để được tư vấn bạn nhé!
◆ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည် ◆
1, Tiền lương trong trường hợp công ty tạm cho nghỉ việc
【Điểm lưu ý】
Nếu công ty của bạn ngưng hoạt động, về cơ bản hãy yêu cầu họ trả 100% tiền lương.
Giả như họ không thể trả đủ tiền lương như hợp đồng、họ phải trả ít nhất 60% tiền lương cho bạn.
Hãy nói rõ với công ty bạn rằng bạn muốn đi làm.
Nếu bạn phải làm việc tại nhà thì họ không có lý do nào để trả lương thấp hơn hợp đồng đã ký với bạn.
（１）Trong trường hợp công ty ngưng hoạt động để tránh sự lây nhiễm của dịch (Trước khi có yêu cầu cách giãn vì dịch cũng như sau khi yêu cầu này được tháo bỏ)
Để phòng tránh lây nhiễm, công ty của tôi đã tạm ngưng hoạt động. Trong trường hợp này liệu tôi có thế nhận được tiền lương không?
Bạn có quyền đòi công ty trả đầy đủ tiền lương cho mình (Luật Dân Sự điều 536, khoản 2) .
(2) Trường hợp đình chỉ hoạt động/đình chỉ kinh doanh (trong thời gian thực hiện cách giãn vì dịch)
ア. Trường hợp yêu cầu không đi ra khỏi nhà dựa trên Luật về Các Biện Pháp Đặc Biệt điều 45, khoản 1)
Công ty đã nghỉ việc vì lý do Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp (緊急事態宣言) đã được ban hành và yêu cầu không được ra ngoài (Điều 45, Khoản 1 của Đạo luật về các Biện Pháp Đặc Biệt chống lại virut Corona chủng mới). Tôi yêu cầu công ty bồi thường cho tôi nhưng chỉ được trả lời rằng: "Đây là yêu cầu từ đất nước, vì vậy chúng tôi không giúp được gì" và họ chẳng giúp tôi gì cả.
Hãy nói rõ với công ty là bạn muốn tiếp tục làm việc chứ không muốn nghĩ rồi yêu cầu công ty trả đầy đủ tiền lương cho bạn (Luật Dân Sự điều 536, khoản 2).
イ Trường hợp bạn bị “Yêu Cầu Cộng Tác” dựa trên Luật về các Biện Pháp Đặc Biệt điều 24, khoản 9
Tôi làm việc cho một cơ sở thương mại ở Tokyo. Nơi làm việc của tôi đã bị yêu cầu ngưng hoạt động do Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp, vì vậy công ty đã đóng cửa. Ngay cả trong trường hợp như vậy, chúng ta không thể yêu cầu công ty bất cứ điều gì hay sao?
Hãy nói rõ với công ty là bạn muốn tiếp tục làm việc chứ không muốn nghĩ rồi yêu cầu công ty trả đầy đủ tiền lương cho bạn. Ít nhất là họ có trách nhiệm phải trả viện trợ nghỉ việc cho bạn (Luật Lao Động điều 26).
(3) Sử dụng trợ cấp điều chỉnh việc làm
Tôi đã yêu cầu thanh toán tiền bồi thường nghỉ phép khi công ty tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên họ nói rằng tôi không đủ khả năng và thậm chí sẽ không trả 60% tiền trợ cấp nghỉ phép.
Yêu cầu công ty của bạn sử dụng Trợ Cấp Điều Chỉnh Việc Làm được tài trợ từ chính phủ quốc trong việc trợ cấp nghỉ phép của bạn. Ít nhất là phải trả trợ cấp nghỉ phép cho bạn theo Mục 26 của Bộ Luật Lao động.
(4) Trường hợp đình chỉ hoạt động/đình chỉ kinh doanh
Công ty đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng của Virut Corona chủng mới. Tôi vẫn có thể nhận được tiền lương trong trường hợp này chứ?
Bạn có quyền đòi công ty trả đầy đủ tiền lương cho mình (Luật Dân Sự điều 536, khoản 2)
Công ty tôi sản xuất và bán hàng may mặc. Tôi làm nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng tại một cửa hàng công ty trong một cửa hàng bách hóa. Sau khi Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp được đưa ra, cửa hàng bách hóa đã đóng của vì thế nơi tôi làm việc cũng đã đóng cửa. Tiền lương của nhân viên của tôi hoặc của nhân viên khác trong trường hợp này sẽ như thế nào? Tôi có thể nhận được ít nhất khoản trợ cấp nghỉ phép không?
Ít nhất là công ty có trách nhiệm phải trả viện trợ nghỉ việc cho bạn (Luật Lao Động điều 26). Hơn nữa, Bạn có quyền đòi công ty trả đầy đủ tiền lương cho mình (Luật Dân Sự điều 536, khoản 2)
(5) Giảm giờ làm
Công ty của tôi không ngưng hoạt động nhưng rút ngắn thời gian làm việc vì thế tôi đã bị cắt giảm giờ làm việc.
Bạn hãy yêu cầu công ty trả luôn cả tiền những giờ làm việc bị cắt giảm (Luật Lao Động điều 536, khoản 2)
(6) Trường hợp bị giảm tiền lương do làm việc tại nhà
Công ty tôi cho rằng vì tôi làm việc tại nhà không phải đến công ty nên tiền lương của tôi bị giảm, đây có phải là điều hiển nhiên không?
Trong trường hợp này bạn hãy cứ yêu cầu công ty trả đủ tiền lương như khi bạn đến công ty làm việc (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 8)
2, Phòng Chống lây nhiễm
Hãy yêu cầu công ty của bạn đưa ra những nguyên tắc phòng chống lây nhiễm.
Nếu công ty ra luật phải mang khẩu trang, bạn hãy yêu cầu công ty chuẩn bị khẩu trang.
（１）Biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở kinh doanh
ア Đối với công nhân làm việc bên ngoài các tổ chức y tế
Công ty tôi không nghĩ ra biện pháp nào để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Yêu cầu công ty có biện pháp ngăn lây nhiễm cụ thể. Ngoài ra, có thể thảo luận tại nơi làm việc, đề xuất các biện pháp đối phó cụ thể để công ty thực hiện (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 5) .
イ Đối với công nhân làm việc tại các tổ chức y tế
Tôi đang làm việc tại một cơ sở y tế, bệnh viện không cho biết thông tin liệu tôi đã tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm virut chủng loại mới Corona hay không, thêm vào đó, bệnh viện cũng không cho thông tin về cách phòng ngừa lây nhiễm nên tôi rất lo lắng.
Các cơ sở y tế, không giống như nơi làm việc thông thường, khả năng mắc bệnh là rất cao. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng yêu cầu bệnh viện có biện pháp cụ thể để ngăn ngừa lây nhiễm.
（２）Nếu bạn được yêu cầu đeo khẩu trang
ア Có phải tôi sẽ bị kỷ luật nếu không đeo khẩu trang không?
Công ty đã yêu cầu tôi đeo khẩu trang trong khi làm việc. Tuy nhiên, tôi không thể mua khẩu trang dù đã đi tìm nhiều nơi, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi làm mà không đeo khẩu trang. Khi đó, tôi được thông báo: "không đeo khẩu trang là vi phạm lệnh kinh doanh. Nếu ngày mai tiếp tục không mang khẩu trang, tôi sẽ bị kỷ luật.".
Bạn không thể bị kỷ luật vì làm như thế là lạm dụng quyền lực (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 15) .
イ Ai sẽ trả tiền mua khẩu trang?
Công ty yêu cầu: " đeo khẩu trang trong lúc làm việc", vì vậy tôi đã mua được khẩu trang và đi làm. Tuy nhiên, tôi phải chịu chi phí này không?
Không. Công ty phải chịu chi phí mua khẩu trang.
(3) Trường hợp bạn cảm thấy bất an vì phải đi làm
Tôi sống ở một nơi vốn bắt buộc phải đi những chuyến tàu bận rộn vào buổi sáng đến công ty. Tôi không muốn đi làm vì tôi muốn tránh nhiễm virut Corona chủng mới. Tuy nhiên, công ty vẫn hoạt động bình thường và ra lệnh cho tôi đi làm. Tôi có phải vâng lời không?
Hãy nói với công ty rằng bạn không thể đi làm để ngăn ngừa lây nhiễm. Hãy yêu cầu họ cho bạn làm việc lệch giờ hay làm việc tại nhà.
3, Việc trả lương trong trường hợp bạn bị nhiễm Corona ngoài công sở
Hãy kiểm tra xem bạn có được đảm bảo tiền lương như quy tắc việc làm không, và xem xét nhận trợ cấp thương tật và ốm đau.
(Tuỳ vào trường hợp), hãy xem xét xem liệu có cần làm thủ tục về tai nạn lao động không.
(1) Về tiền lương trong khi bạn không thể làm việc vì bị nhiễm virut Corona chủng mới không phải ở công sở
Tôi đã bị nhiễm virut chủng loại mới Corona. Công ty yêu cầu tôi không đi làm.
Vậy, tiền lương sẽ được trả trong trường hợp này?
Theo nguyên tắc chung, công ty không bắt buộc phải trả lương, nhưng hãy kiểm tra
các quy định làm việc của bạn để biết hệ thống nghỉ ốm. Ngoài ra, bạn cũng có thể
nhận được trợ cấp ốm đau.
(2) Các hành vi không đúng đắn đối với người lao động bị nhiễm virut Corona chủng mới
Q Tôi đã bị nhiễm virut Corona chủng mới. Khi tôi báo cáo với công ty, ông chủ của tôi
nói với tôi: "Tôi phải đóng công ty của mình. Anh phải trả tất cả doanh số cho giai đoạn
đó." Tôi có phải trả tiền không?
A Bạn không có trách nhiệm bù lỗ cho doanh số của công ty trong trường hợp này.
3-2 Bồi thường tai nạn nghề nghiệp
Nếu bạn được chứng nhận là bị nhiễm virut Corora trong thời gian làm việc bản sẽ được nhận bồi thường tai nạn nghề nghiệp
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã đưa ra hướng dẫn khi nào các trường hợp bị nhiễm virut Corona chủng mới được công nhận là tai nạn công nghiệp.
(3).1 Bị nhiễm virut Corona chủng mới trong thời gian làm việiws moc
Nếu tôi bị nhiễm virut Corona chủng mới khi làm việc thì tôi sẽ nhận được bảo hiểm
Nếu bạn được chứng nhận là nhiễm virut Corona chủng mới trong thời gian làm việc
bạn sẽ nhận được chi trả về viện phí và tiền nghỉ bệnh.
(3).2 Dành cho nhân viên y tế
Chúng tôi là bác sĩ và điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện. Chúng tôi đã bị sốt cao
và khi kiểm tra đã phát hiện ra là chúng tôi bị nhiễm virut Corona chủng mới. Trong trường
hợp này chúng tôi có được công nhận là bị tai nạn nghề nghiệp không?
Bạn có thể làm thủ tục yêu cầu chứng nhận tại bạn lao động. Trong trường hợp bạn
vì bị nhiễm virut không thể làm nộp thủ tục được có thể yêu cầu bệnh viện làm cho bạn.
(3).3 Trường hợp người lao động đang làm việc trong môi trường có khả năng lây nhiễm virut cao
Tôi là nhân viên thu ngân ở một siêu thị. Hàng ngày tôi phải tiếp xúc với rất nhiều
khách hàng nhưng công ty của tôi không có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm nào cả. Vì thế tôi phải làm việc trong lo sợ. Vì thế khi tôi bị sốt và đến bệnh viện khám thì được biết là đã bị nhiễm virut Corona chủng mới. Tôi không biết tôi bị lây nhiễm lúc nào, từ ai và ở đâu thì có được công nhận là bị tai nạn lao động không?
Trường hợp của bạn khả thể được công nhận là tai nạn lao động rất cao. Trước hết hãy
trao đổi với luật sư và nhũng người quản lý lao động.
(3).4 Trường hợp bị nhiễm virut Corona chủng mới trên đường đi đến công ty
Tôi bị nhiễm virut Corona chủng mới và phải nghỉ việc. Tôi cho rằng nghiêm nhân là
do tôi đi làm trên những chuyến tàu đông người. Trường hợp này có được xem là tai nạn lao
Trường hợp của bạn có khả năng được công nhận là tai nạn lao động. Trước hết hãy
làm thủ tục để nhận tiền trợ cấp nghỉ bệnh.
4, Trường hợp công ty yêu cầu bạn ở nhà chờ thông báo
Hãy yêu cầu công ty trả lương đầy đủ.
Gần đây tôi thường bị ho. Có lẽ tôi đã bị nhiễm virut Corona chủng mới . Công ty của tôi yêu cầu tôi ở nhà. Tôi có thể được trả tiền lương nếu tôi đợi ở nhà theo hướng dẫn của công ty không?
Ngoài ra, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được hướng dẫn ở nhà vì gia đình tôi có người bị nhiễm bệnh mặc dầu tôi khoẻ mạnh?
Nếu công ty của bạn yêu cầu bạn ở nhà, về cơ bản bạn nên yêu cầu công ty trả lương đầy đủ (Luật Dân Sự điều 536, khoản 2) .
5, Trường hợp bị sa thải
Ngay cả khi bị sa thải hoặc buộc thôi việc bạn không nên bỏ cuộc ngay.
Việc sa thải nhân viên do bởi ảnh hưởng của virut Corona chủng mới bị cấm cách nghiêm ngặt.
Ngay cả khi bạn không muốn quay trở lại công ty làm việc, vẫn có thể đấu tranh về việc sa thải / đình chỉ việc làm.
Đối với các hợp đồng lao động có thời hạn cố định, cần có sự cân nhắc chuyên nghiệp hơn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia thay vì tự phán quyết.
（１）Trường hợp bị sa thải
Tôi đã làm việc như một nhân viên toàn thời gian (hợp đồng vô thời hạn), nhưng công ty nói với tôi rằng tôi sẽ bị sa thải vì việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virut Corona chủng mới .
Trong trường hợp này họ không thể sa thải bạn dễ dàng như thế (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 16) .
（２）Trường hợp bị chấm dứt hợp đồng có thời hạn
Tôi là một "nhân viên không chính thức" và tôi làm việc4năm với hợp đồng lao động có thời hạn và tôi có thể tiếp tục gia hạn như thế này (ví dụ: nhân viên hợp đồng, nhân viên bán thời gian). Tuy nhiên do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới công ty thông báo là tôi sẽ bị sa thải.
Các quy định sẽ tùy thuộc vào hợp đồng đã hết hạn (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 19) hoặc đang trong khoảng thời gian hợp đồng (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 17). Dù thế nào đi nữa, đừng bỏ cuộc!
(3) Trường hợp sa thải đồng loạt tất cả nhân viên
Khi tôi đến công ty, trong cuộc họp buổi sáng, người quản lý công ty đột nhiên nói với tôi rằng "Tôi sẽ sa thải mọi người hôm nay do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới". Tôi nên làm gì lúc này?
Nên nhớ rằng sa thải nhân viên kiểu này thì không thể chấp nhận được.
6, Trường hợp bị huỷ hợp đồng chưa chính thức ký
Hủy bỏ hợp đồng chưa chính thức ký cũng giống như sa thải, công ty không thể tự tiện làm được.
Chính phủ đang kêu gọi "xem xét đặc biệt" đối với các tổ chức kinh tế lớn để không hủy bỏ các hợp đồng chưa chính thức ký do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới, vì vậy hãy thông báo cho công ty và yêu cầu họ có biện pháp thích hợp.
Tôi đã có được hợp đồng chưa ký chính thức từ một công ty nhận vào làm việc. Tuy nhiên, họ thông báo rằng họ sẽ hủy hợp đồng với tôi do kinh doanh bị ảnh hưởng của virut Corona chủng mới. Trong trường hợp này tôi có thể làm gì?
Hủy bỏ một lời mời làm việc cũng giống như việc sa thải. Việc hủy bỏ hợp đồng chưa ký chính thức chỉ được thực hiện khi có các yếu tố tương tự để sa thải nhân viên. Do đó, chỉ vì kinh doanh giảm sút mà huỷ bỏ hợp đồng này thì không hợp pháp (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 16) .
7, Khuyến khích nghỉ việc
Trước hết, hãy xác nhận rõ xem đó chỉ là nghỉ phép hay bị buộc thôi việc/bỏ việc.
Nếu bạn được yêu cầu nghỉ việc (bỏ việc), hãy xác nhận xem đó là sa thải hay chỉ là một đề nghị nghỉ việc.
Bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận đề nghị thôi việc. Nếu bạn chấp nhận đề nghị tạm nghỉ việc, hãy yêu cầu công ty làm bảng cam kết sẽ ký hợp đồng lại với bạn về sau.
Nhà máy đã không còn hoạt động do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới. Giám đốc của tôi nói rằng ngay bây giờ tôi không có công việc cho tôi. Công ty sẽ ký hợp đồng lại với tôi khi hoạt động trở lại, vì vậy hãy kiên nhẫn trong thời gian này. Tôi nên làm thế nào đây?
Đầu tiên, hãy làm rõ xem liệu giám đốc đang đề cập đến việc bỏ việc (nghỉ việc ở công ty) hay đang ra lệnh cho bạn nghỉ việc nhé.
（１）Trường hợp ngừng kinh doanh
Trong trường hợp này hãy tham khảo mục (1) về tiền lương.
（２）Trường hợp thôi việc
Nếu công ty đề cập đến việc bỏ việc, cũng hỏi rõ công ty rằng có phải họ sa thải bạn hay chỉ được khuyến khích nghỉ việc.
Nếu chỉ là đề nghị thôi việc, bạn không bị bắt buộc phải tuân thủ đề nghị đó. Vì vậy, đừng chấp nhận việc cho thôi việc cách quá dễ dàng.
8, Tăng ca・ Làm việc nhiều giờ
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải xem xét an toàn cho người lao động và điều chỉnh thời gian làm việc cho thích hợp. Đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, cần quan tâm giảm tối đa gánh nặng cho người lao động.
Luật quy định mỗi ngày làm việc 8 tiếng và một tuần là 40 tiếng.
Kiểm tra xem công ty có tuân thủ quy định số 36 và những quy định liên quan đến việc giới hạn thời gian làm việc hay không.
Để điều chỉnh vấn đề lao động quá giờ/trong thời gian dài, cần nắm rõ cách quy định chung về giờ lao động.
Do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới, giờ làm việc của tôi đã tăng lên đáng kể. Tôi lo lắng cho sức khỏe của mình nếu tình trạng này kéo dài.
Bạn có thể tìm cách điều chỉnh thời gian làm việc cho thích hợp. Không thể chỉ vì ảnh hưởng của virut Corona chủng mới mà phải làm việc quá nhiều giờ, cũng nên lo lắng về việc bạn có thể tử vong do làm việc quá sức (Luật Lao Động điều 36, Luật Hợp Đồng Lao Động điều 5) .
9, Nghỉ phép
Luật lao động yêu cầu công ty cho nghỉ phép có lương đặc biệt (sau đây gọi là "nghỉ phép đặc biệt"). Loại nghỉ phép này khác với nghỉ có lương hàng năm được quy định bởi Luật Lao động.
Bạn được nghỉ phép hàng năm ngay cả khi bạn không có chế độ nghỉ phép đặc biệt.
Nếu có lý do bạn có thể nghỉ phép mà không có bất kỳ vấn đề nào.
Nếu bạn không thể đi làm vì cần chăm sóc con do trường học bị đóng cửa, bạn không thể bị đuổi việc hoặc bị buộc thôi việc.
（１）Nghỉ phép của phụ huynh do con cái phải nghỉ học
Trường tiểu học đã đóng cửa và tôi phải chăm sóc con cái. Trường hợp này tôi có thể nghỉ phép không?
Trong trường hợp này hãy yêu cầu được nghỉ phép theo dạng nghỉ phép đặc biệt.
（２）Có hay không việc sa thải khi không thể đi làm
Công ty của tôi đã không cho tôi có kỳ nghỉ đặc biệt. Thêm vào đó, tôi lấy hết các kỳ nghỉ được trả lương khi con tôi bị ốm trước đó. Nay trường tiểu học đã đóng cửa tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vắng mặt để chăm sóc con cái, liệu tôi có bị công ty sa thải không?
Nếu bạn sẽ vắng mặt tại nơi làm việc, hãy thông báo cho công ty rằng bạn sẽ phải nghỉ làm để chăm sóc con vì các trường tiểu học đóng cửa rồi nghỉ phép. Trường hợp này công ty không thể sa thải bạn được.
10, Trường hợp người lao động mang thai
Tôi đi làm bằng tàu điện. Tôi hiện đang mang thai và thực sự không muốn đi làm để tránh nguy cơ nhiễm virut Corona chủng mới. Tôi xin nghỉ phép nhưng công ty không đồng ý và ngược lại, tôi được bảo là "nếu không đi làm được thì nghỉ hẳn luôn đi" Tôi đã sử dụng hết kỳ nghỉ có lương của mình và không có cách nào để nghỉ ngơi. Tôi nên làm gì?
Khi không thể đi làm hãy nói rõ với công ty rằng bạn không đi làm được vì muốn
tránh bị lây nhiễm. Trong trường hợp này họ không thể sa thải bạn.
11, Làm việc chênh lệch giờ・Làm việc tại nhà
Về nguyên tắc, công ty không thể đơn phương ra lệnh làm việc lệch giờ mà không có thỏa thuận của công nhân.
Mặt khác, công ty phải cho phép làm việc chênh lệch giờ nếu công nhân yêu cầu ở mức độ cần thiết, để bảo đảm an toàn cho công nhân.
Theo nguyên tắc chung, công ty không thể chỉ cho phép nhân viên chính thức được làm việc lệch giờ mà không cho phép nhân viên bán chính thức làm như thế.
Cũng liên quan đến việc làm việc tại nhà, nếu công ty hướng dẫn nội dung công việc và thiết bị truyền thông thông tin luôn ở trạng thái có thể liên lạc, thì hệ thống khấu trừ tại chỗ không áp dụng và công ty phải trả tiền làm thêm giờ.
（１）Làm việc chênh lệch giờ
ア Trường hợp công ty đơn phương ra chỉ thị
Công ty đã ra lệnh cho tôi làm việc chênh lệch giờ. Trước đây thời gian làm việc là từ 9:00 sáng đến 6:00 tối, nhưng bây giờ là 11 giờ sáng đến 8:00 tối. Tôi cảm thấy nặng nề khi trở về nhà muộn như thế.
Vì thời gian bắt đầu và kết thúc công việc được quy định trong nội dung của hợp đồng lao động, nên cần có sự thỏa thuận giữa hai bên. Công ty không thể đơn phương thay đổi (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 8) .
イ Trường hợp công ty không cho phép làm việc lệch giờ
Mặc dù tôi rất lo lắng về việc đi lại trên những chuyến tàu đông đúc, công ty vẫn không cho phép tôi làm việc lệch giờ. Tôi nên làm thế nào?
Bạn có thể lấy lý do phòng ngừa lây nhiễm để yêu cầu công ty cho phép bạn làm việc lệch giờ (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 5) .
ウ Trường hợp làm việc lệch giờ của lao động bán chính thức
Nhân viên chính thức được phép làm việc lệch giờ do ảnh hưởng của virút Corona chủng mới, nhưng nhân viên bán chính thức như chúng tôi không được phép làm như thế.
Việc không cho phép những nhân viên bán thời gian làm việc lệch giờ là không hợp lý. Vì thế hãy yêu cầu công ty cho phép các bạn được làm việc lệch giờ như những nhân viên chính thức (Bộ Luật điều 8 và9về Quản Lý và cải thiện liên quan đến trường hợp lao động ngắn hạn và lao động với hợp đồng có thời hạn). .
（２）Làm việc tại nhà
Công ty yêu cầu chúng tôi làm việc tại nhà. Mặc dù làm việc 10 giờ mỗi ngày, tôi được coi là bên ngoài doanh nghiệp, vì vậy tôi chỉ được trả 8 giờ. Đây có phải là điều không thể tránh khỏi?
Hãy yêu cầu công ty trả lương đủ 10h cho bạn.
Công ty yêu cầu tôi làm việc tại nhà. Thời gian làm việc tại nhà tôi dùng máy tính
cá nhận. Để cài đặt các phần mềm bảo vệ theo yêu cầu của công ty cũng như các camera, tai nghe dùng cho các cuộc họp online thì tôi phải tự trả tiền hay sao?
Cứ bình thường công ty phải chi trả các khoản này. Tuỳ theo hoàn cảnh có thể bạn
phải chi trả một phần.
Trong thời gian làm việc tại nhà tôi phải họp online với các sếp hay khách hàng nên
đã sử dụng internet rất nhiều. Tôi có thể yêu cầu công ty chi trả phí internet cho tôi không?
Hãy yêu cầu công ty trả phí internet cho bạn như một phần của tiền viện trợ khi làm việc tại nhà.
12, Quấy Rối
Công ty phải có trách nhiệm với những quấy rối đối với nhân viên. Khi bạn bị quấy rối hãy liên hệ cho công ty hoặc công đoàn.
Vì số người bị nhiễm virut Corona chủng mới gia tăng mà phân biệt đối sử dựa trên quốc tịch, vùng miền là điều không thể chấp nhận.
（１）Quấy rối từ khách hàng
Tôi đang làm việc ở một hiệu thuốc. Hàng ngày đều có khách hàng gọi đến hỏi mua khẩu trang. Khi tôi trả lời chưa có hàng thì thường bị khách mắng. Tình trạng này diễn ra liên tiếp từ hơn hai tuần rồi. Tôi cảm thấy quá sức chịu đựng của mình. Tôi phải làm sao đây?
Hãy yêu cầu công ty có các biện pháp đối với loại phàn nàn như thế này (Hướng dẫn dựa trên Đạo luật thúc đẩy toàn diện chính sách lao động “Hướng dẫn về các biện pháp nên được thực hiện trong quản lý việc làm liên quan đến các vấn đề gây ra bởi hành vi của chủ doanh nghiệp” (tham khảo: Thông Báo của Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi (令和2年)) .
（２）Quấy rối người nước ngoài
Tôi là người nước ngoài. Có lẽ vì có nhiều người nhiễm bệnh ở nước tôi, nên ở công ty nhiều người không cho tôi đến gần và tôi không được phép làm một số công việc. Tôi cảm thấy thật đau khổ. Tôi nên làm gì đây?
Đây là hành vi phân biệt đối xử không có lý do. Hãy yêu cầu công ty vào cuộc để thay đổi hiện tượng này (tham khảo Bộ Luật Lao Động điều 3) .
13, Phái cử
Nếu bạn bị sa thải trong thời gian hợp đồng lao động có thời hạn cố định còn thời hạn, bạn có thể yêu cầu được trả mức lương bạn vốn sẽ được nhận cho đến khi hết thời hạn từ cơ quan sai phái.
Nếu bạn không được gia hạn sau khi thời hạn hợp đồng hết hạn, hãy nói chuyện một cách kiên quyết để gia hạn hợp đồng. Bạn có thể yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo đảm việc làm trong trường hợp này.
Người lao động theo hợp đồng lao động tạm thời có thể yêu cầu bên sai phái và bên nhận người lao động điều chỉnh những điều không hợp lý trong quá trình làm việc.
（１）Sa thải trong thời gian hợp đồng
Tôi được thông báo rằng tôi sẽ bị cho thôi việc trong thời hạn hợp đồng lao động vẫn còn thời hạn vì hoạt động kinh doanh của công ty gặp khó khăn do virut Corona chủng mới. Tôi sẽ không thể có tiền lương như hiện tại và không biết phải sống sao?
Hãy yêu cầu công ty trả đầy đủ tiền lương cho bạn cho đến khi hết hợp đồng (Luật Hợp Đồng Lao Động điều 17 khoản 1). .
（２）Buộc thôi việc khi hết thời hạn hợp đồng
Do ảnh hưởng của virut Corona chủng mới, người ta nói rằng sẽ không gia hạn hợp đồng với tôi khi kết thúc hợp đồng này. Như vậy là tôi sẽ mất việc phải không?
Hãy thương thảo với bên phái cử và công ty để được gia hạn hợp đồng. Bạn có thể yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo đảm việc làm trong trường hợp này (Luật Sai Phái người Lao Động điều 30) .
（３）Trường hợp có sự khác biệt không hợp lý về điều kiện làm việc giữa nhân viên chính thức và nhân viên bán chính thức
Các nhân viên chính thức được nghỉ phép đặc biệt để chăm sóc con cái của họ khi các trường học đóng cửa vì ảnh hưởng của virut Corona chủng mới, trong khi tôi là nhân viên bán chính thức thì không được nghỉ.
Có những trường hợp sự khác biệt không hợp lý này có thể được điều chỉnh (Luật Sai Phái người Lao Động điều 30), khoản 3) .
14, Làm việc tự do
Hãy kiểm tra quyết định hủy bỏ công việc của bạn (hợp đồng và trao đổi email).
Chính phủ yêu cầu khi muốn thay đổi hợp đồng với người làm việc tự do phải thảo luận kỹ lưỡng với họ về các điều kiện như số tiền bồi thường và ngày thanh toán bằng văn bản. Vì thế hãy làm rõ tất cả các thay đổi và giữ các văn bản lại để sử dụng chúng khi cần.
Có các biện pháp hỗ trợ của chính phủ đối với những người làm việc tự do (hỗ trợ cho các ngày nghỉ do trường học nghỉ). Hãy tìm hiểu xem bạn có thể nhận những viện trợ này không.
အလုပ်သမားများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်လုပက် ိုင်မှု ဆိုင်ရာ အမမး/အမ ြေ (Ver.2)
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ဂျပန်နိုင်ငံ အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ မရှ့မနများအသင်း
ဤအမေး/အမ ြေများသည် ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်သေားနှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အမကကာင်းအရာေျားကို ဥပမေမရးရာနှင့် လက်တ ွေ့လုပ်တောင်ချက်များအ ွေက် အကကံ ပုထား ြင်း ြေစ်သည်။ LLAJ သည် အလုပ်ြွင်၌ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပသနာရပ်ေျားကို ရင်ဆိုင်မတွ့ကကုံမနရသည့် အလုပ်သေားေျားအတွက် ရည်ညွန်းြျက်တစ်ရပ်အ ြေစ် အသုံးပုနိုင်ရန် ပုလုပ်ထားြင်းြေစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့မသာ အြက်အြဲပဿနာေျားနှင့် ကကုံမတွ့လာရသည့်အြါ ပပဿနာများကို သင် စ်ဉီး ည်း မြေရှင်းေည့်အစား မရှ့မန သို့ေဟုတ် အလုပ်သေားသေဂ္ဂ စ်ခုခုနှင့် တိုင်ပင်သင့်မကကာင်း အကကံပုလိုပါသည်။ ဤတမးခွေန်းလွှာ၏ မနာက်ဆုံး စာေျက်နှာတွင်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အြျက်အလက်ေျားကိုလည်း မြေါ် ပထားပါသည်။
၁။ ြိတ်သိမ်းထားသည့် (Closedown) ကာလအတွင်း လုပ်ြလစာ
သင့်၏အလုပ် ရပ်ဆိုင်းြံလိုက်ရပါက၊ သင၏် လုပ်ြလစာ အ ပည့်အဝကိုမတာင်းြံသင့်သည်။
အကယ်၍ လုပ်ြလစာ ၁၀၀% ကို ပန်လည်ထုတ်မပးရန်ေြေစ်နိုင်ပါက ဥပမေအရ သင့်လုပ်ြလစာ၏ ြန့်ေှန်းမ ြ
ဤအမ ြအမနတွင် သင်သည် အလုပ်သေားတစ်ဦးအမန ြေင့် လုပ်ငန်းြွင်သို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်
လိမု ကကာင်း သင်၏ကုေ္ပဏီကို ပသရန် လိုအပ်မပသည်။
မနအိေ်က အလုပ်လုပ်ရ ြင်းသည် လုပ်ြလစာ မလျာ့ြျရန် ြိုင်လုံမသာ အမကကာင်း ပြျက်တစ်ြု ေဟုတ်ပါ။
(၁) အကယ်၍ သင်၏ကုေ္ပဏီသည် ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်မရး အစီအေံတစ်ရပ်အ ြေစ် အလုပ်ပိတ်ထားြဲ့လျှင်။ (နိုင်ငံ၏ အမရး မပါ်အမ ြအမနေတိုင်ေီနှင့် ပပီးမနာက်)
မေး။အကယ်၍ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်ပန့်ပွားေှုကိုကာကွယတ်ားဆီးရန်ကျွန်ုပ်၏ကုေ္ပဏီသည်ပိတ်ထားြဲ့ရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်ေလုပ်ရမသာ်လည်း ကျွန်ုပ်၏ပုံေှန်လစာကို ြံစားြွင့် ရှိပါသလား။
မ ြေ။ သင့်လုပ်ြလစာအ ပည့်ကို သင်၏ကုေ္ပဏီထံေှ မတာင်းြံသင့်သည်။ (ပေို့ ပဥမေ ပုေ်ေ ၅၃၆ အပိုေ် ၂)
(၂) အကယ်၍ သင်၏ကုေ္ပဏီသည် ကိုဗစ်-၁၉ အား တားဆီးကာကွယသ် ည့်အမန ြေင့် ပိတ်ထားြဲ့ရလျှင်။ (နိုင်ငံ၏အမရးမပါ် အမ ြအမန ကာလအတွင်း)
(က) အထူးမဆာင်ရွက်ြျက်ေျားဆငို ်ရာအက်ဥပမေအရ ကေ္ဘာတုပ်မကွးကပ်မရာဂါနှင့် ကူးစက်မရာဂါအသစ်ေျား အတွက် ကကိုတင် ပင်ဆင် ြင်းနှင့် တုန့် ပန် ြင်း ဥပမေပုေ်ေ ၄၅၊ အပိုေ် ၁ အရ မနအိေ်တွင်သာ မနထိုင်ရန် ညွန်ကကား
မေး။ ယြု ကျွန်ုပ် အလုပ်လုပ်ကိုင်မနမသာ ကုေ္ပဏီသည် နိုင်ငံအမရးမပါ်အမြအမနမကကာင့် အစိုးရ၏ မနအိေ်တွင်သာ မနထိုင်ရန် ညွန်ကကားြျက် (အထူးမဆာင်ရွက်ြျက်ေျားအက်ဥပမေ ပုေ်ေ ၄၅၊ အပိုေ် ၁) အရ ကုေ္ပဏီအလုပ်ကို ယာယီပိတ် ထားရန် ဆုံးြေတ်ြျက်ြျထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်ပိတ်ရက် အြမကကးမငွကို မတာင်းဆိုြဲ့မသာ်လည်း ကုေ္ပဏီက “နိုင်ငံမတာ်၏အေိန့”် တ ကာင့် ပြစ်တပါ်လာသည့် ရလေ် ြေစ်မသာမကကာင့် ကုေ္ပဏီ၏ ာဝန်မဟု ်တ ကာင်း ငင်းဆိုြဲ့သည်။
မြေ။ သင်အမနြေင့် အလုပ်ြွင်သို့ စိတ်အားထက်သန်စွာသွားမရာက်လုပ်ကိုင်လိုမကကာင်း သင်၏ အလုပ်ရှင်သိရှိမစရန် မပာ ပရေည် ြေစ်ပပီး၊ သင်ရသင့်သည့် လုပ်အားြအ ပည့်ကို မတာင်းဆိုရေည်။ (ပေို့ ပဥမေပုေ်ေ ၅၃၆ အပိုေ် ၂)
(ြ) အထူးမဆာင်ရွက်ြျက်ေျားအက်ဥပမေ ပုေ်ေ၂၄၊ အပိုေ၉် “ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်ေှုအတွက်မတာင်းဆိုေ”ှု အရ တနအိေ်တွင်မနရန်ညွန်ကကား ြင်း။
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် တိုကျုရိ ှိ စီးပွားြေစ်လုပ်ငန်းတစ်ြုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်တနပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ြုလုံးကို ပိတထ် ားရန် အစိုးရက ညွန်ကကားြျက်မကကာင့် လုပ်ငန်းတစ်ြုလုံး လည်ပတ်ေှုကိုလည်း ရပ်နားထားြဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အမန ြေင့် ကုေ္ပဏီထံ က စ်စုံတစ်ရာကို မတာင်းဆိုေှု ပုလုပ်နိုင်ပါသလား။
မ ြေ။ သင်အမန ြေင့် အလုပ်ြွင်သို့ စိတ်အားထက်သန်စွာသွားမရာက်လုပ်ကိုင်လိုမကကာင်း သင်၏ အလုပ်ရှင်သိရှိမစရန် မ ပာ ပရေည် ြေစ်ပပီး၊ သင်၏ လုပ်ြလစာအ ပည့်ကို မတာင်းဆိရု ေည်။ သင်၏ကုေ္ပဏီသည် အနည်းဆံးု ြွင့်ရက်အကျုးိ ြံစားြွင့်ကို မပးရန်တာဝန်ရှိသည်။ (အလုပ်သေားစံနှုန်းေျားဥပမေ အပိုေ် ၂၆)
(၃) အလုပ်အကိုင်ညှိနှိုင်းေှုဆိုင်ရာ မထာက်ပံ့မကကးေျားအား လက်ြံ ြင်း
မေး။ ယာယီအလုပ်ပိတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်၏လုပ်ြလစာကိုမပးရန် ကုေ္ပဏီကို မတာင်းဆိုြဲ့မသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့ ဘက်က ရန်ပုံမငွေလုံမလာက်မကကာင်း အမကကာင်းပ၍ မလျာ်မကကးေမပးနိုင်မကကာင်း ငင်းဆိုြဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ် လုပ်ခလစာ အပပည့၏် ၆၀% ြေစ်သည့် ြွင့်ရက်အကျုးိ ြံစားြွင့်ကိုလည်း မပးေည်ေဟုတ်မပ။
မြေ။ သင်၏ကုေ္ပဏီသည်၊ အလုပ်ရပ်တန့်ထားသည့်ကာလအတွက် အလုပ်သေားေျားကို မလျာ်မကကးမပးနိုင်ရန် အစိုးရက ပံ့ပိုးမပးမသာ အလုပ်အကိုင်ညှိနှိုင်းေှုဆိုင်ရာမထာက်ပံ့မကကးေျားအတွက် အကျုံးဝင်ေှုရှိေည် ြေစ်သည်။ သင်သည် အလုပ်သေား စံနှုန်းေျား ဥပမေ အပိုေ် ၂၆ အရ သင်နှင့် သင်၏လုပ်တြာ်ကိုင်ြက်များအ ွေက် အနည်းေုံး ခွေင့်ရက်အကျုးိခံစားြွင့်ကို အစိုးရမှပံ့ပိုးတပးသည့် တထာက်ပံ့တငွေကို အသုံး ပု၍ မပးရန်မတာင်းဆသို င့်သည်။
(၄) သင်၏ကုေ္ပဏီက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေှုကို ရပ်စဲလိုက်ပါက
မေး။ ကိုဗစ်-၁၉မကကာင့် ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိမသာ ကုေ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းတောင်ရွက်မှုများကိုရပ်နားထားရသည်။ ထိုသို့ရပ်စဲြျနိ ်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ြလစာ ကိုရနိုင်ပါသလား။
မေး။ကျွန်ုပ်သည်အဝတ်အထည်ထုတ်လပု်မသာလုပ်ငန်းတစ်ြုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်တစ်ြုရှိ အငှားဆိုင်တစ်ြု၏ စာမရးတစ်ဦး ြေစ်သည်။ နိုင်ငံအမရးမပါ်အမ ြအမန ထုတ် ပန်ပပီးမနာက်၊ စတိုးဆိုင်သည် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ေေှုျားကိုရပ်နားထားြဲ့ရပပီး၊ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မနမသာမစျးဆိုင်လည်းပိတ်ထားြဲ့ရသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ လုပ်မြော်ကိုင်ြေက်ေျား၏ လုပ်ခလစာေျားေှာ ေည်သို့ ြေစ်လာနိုင်သနည်း။
မ ြေ။ သင်သည် အနည်းဆုံး ြွင့်ရက်အကျုးိ ြံစားြွင့်အား မတာင်းြံသင့်သည်။ (အလုပ်သေားစံနှုန်းေျား ဥပမေ ပုေ်ေ၂၆) သင်၏ အမ ြအမနအမပါ်ေူတည်ပပီး သင်၏လစာအ ပည့် ကိုမတာင်းြံနိုင်သည်။ (ပေို့ ပဥမေပုေ်ေ ၅၃၆ အပိုေ် ၂)
(၅) အလုပ်ြျနိ ်မလျာ့ြျ ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မနမသာ ကုေ္ပဏီသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကို ေရပ်နားမသာ်လည်း အလုပ်ြျနိ ်ကို မလျာြ့ ျလိုက် မသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်၏ အလုပ်ြျနိ ်အဆိုင်းကို ြေျက်သိေ်းလကို ်ပါသည်။
မ ြေ။ သင်၏အလုပ်ြျနိ ်ကို ြေျက်သိေ်းလကို ်မသာမကကာင့် ကုေ္ပဏီက သင်၏လုပ်ြလစာအ ပည့က် ိုမပးရန် မတာင်းြံသင့်သည်။ (ပေို့ ပဥမေ ပုေ်ေ ၅၃၆ အပိုေ် ၂)
(၆) တနအိေ်ေှ အလုပ်လုပ်ရ ြင်းမကကာင့် လုပ်ြလစာမလျှာ့ြျြံရ ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်ကိုေသွားရဘဲ တနအိေ်ေှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမသာမကကာင့် ကုေ္ပဏီက ကျွန်ုပ်၏ လုပ်ြလစာကို မလျှာ့ြျ ေည်ဟု မ ပာကကားလာပါက ေည်သို့ ပုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
မ ြေ။ သင်သည် ကုေ္ပဏီထံက ပုံေှန်ရမနကကလုပ်ြလစာအတိုင်းမပးရန် မတာင်းဆိုသင့်ပါသည်။ (အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေ ပုေ်ေ ၈)
၂။ အလုပ်ခွင် ကကိုတင်ကာကွယ်မရးအစီအမံများ
သင်သည် သင့်ကုေ္ပဏီကို မရာဂါကူးစက်ေှုကာကွယရ် န် သင့်မလျာ်မသာ အစီအေံေျားကို လုပ်မဆာင်မပးရန် မတာင်းဆိုသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုေ္ပဏီက နှာမြါင်းစည်းေျားကို ေြေစ်ေမနဝတ်ဆင်ရန် သတ်ေှတ်ထားပါက ကုေ္ပဏီသည် သင်နှင့် သင်၏လုပ်မြော်ကိုင်ြေက်ေျားအတွက် နှာမြါင်းစည်းေျား စီစဉ်ထားမပးပါသလား။
(၁) အလုပ်ြွင်၌မရာဂါကူးစက်ေှုကို ကာကွယ် ြင်း (က)သင်သည်မဆးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်သေားတစ်ဉီးေဟုတပ်ါက
မေး။ ကျွန်ုပ်၏ကုေ္ပဏီသည် မရာဂါကူးစက်ေှုအန္တရာယ်မလျှာ့ြျမရး အစီအေံေျားပုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားေှု အနည်းငယ်သာ ရှိမနသည်။
မြေ။ သင်သည် သင၏် ကုေ္ပဏီအား တိကျမသာ ကကိုတင်ကာကွယေ် ှုအစီအေံေျား ပုလုပ်မပးရန် မတာင်းဆိုသင့်သည်။ (အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေ ပုေ်ေ၅)။ သင့်အမနြေင့် ဤအမကကာင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်ပပီး အလုပ်ြွင်အတွင်း မဆွးမနွးသင့်ပပီး တိကျမသာကကိုတင်ကာကွယ်ေှုအစီအေံေျား ပုလုပ်မပးရန်ကုေ္ပဏီထံ တင် ပသင့်သည်။
(ြ) သင်သည် မဆးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သေားတစ်ဉီး ြေစ်ပါက
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် မဆးဘက်ဆိုင်ရာဌာနတစ်ြုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မနပပီး၊ မဆးရုံက ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ရှ/ိ ေရှိ နှင့် မရာဂါ ကူးစကေ် ှုကို ကာကွယရ် န် ေည်သို့မသာ အစီအေံေျားပုလုပ်ေည်ကို အသိမပးေှု ေရှိမသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်သည် စိုးရိေ်ေှုေျား ရှိမနသည်။
မ ြေ။ မဆးဘက်ဆိုင်ရာဌာနေျားသည့် အထူးသပြင့် မရာဂါကူးစကေ် အှု ေျားဆုံး ြေစ်နိုင်မသာမနရာေျား ြေစ်သည်။ သင်အမန ြေင့် ကာကွယမ် ရးအစီအေံေျားကို အလျှင်အ ေန် လုပ်မဆာင်မပးရန် မတာင်းဆိုသင့်သည်။
(၂) အလုပ်ြွင်၌ နှာမြါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရန်မ ပာလာပါက
(က) နှာတခါင်းစည်းမဝ ်ဆင်ပါက အ ပစ်မပးြံရနိုင်ပါသလား။
မေး။ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်မနသာ ကုေ္ပဏီက အလုပ်ြွင်၌ နှာမြါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရန်မပာကကားထားပါသည်။ သို့မသာ် ကျွန်ုပ် သည် နှာမြါင်းစည်းကို ေည်သည့်မနရာေှာေှ ရှာဝယ်၍ ေရမသာမကကာင့် အလုပ်ကို နှာမြါင်းစည်းေဝတ်ဘဲ သွားြဲ့ပါသည်။ တမန့တွင် ကျွန်ုပ်သည် ကုေ္ပဏီ၏ညွှန်ကကားြျက်ကို ြျုးိ မြောက်မနမကကာင်း မနာက်ရက်ေျားတွင် နှာမြါင်းစည်း ေဝတ်ဆင်လာ ပါက စည်းကေ်းအတိုင်း အ ပစ်မပးြံရေည်ဟု မ ပာကကား ြင်းကို ြံြဲ့ရသည်။
မ ြေ။ ထိုသို့မသာအေိန့်အာဏာေျုးိ သည် စည်းကေ်းထိန်းသိေ်းမရးအာဏာကို အလွဲသုံးစား ပု ြင်း ြေစ်သည်၊ ထို့မကကာင့်တရား ေဝင်ပါ။ (အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျားအက်ဥပမေပုေ်ေ ၁၅)
(ြ) ကျွန်ုပ်၏ နှာမြါင်းစည်းအတွက် ေည်သူက အကုန်အကျြံသင့်ပါသလဲ။
မေး။ အလုပ်ြျနိ ်တွင် နှာမြါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရန် ကုေ္ပဏီက မ ပာကကားထားမသာမကကာင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် နှာမြါင်းစည်းေျားကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူထားပါသည်။ နှာမြါင်းစည်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျွန်ုပ်က မပးရေည်လား။
မ ြေ။ သင်ေမပးရပါ၊ ကုေ္ပဏီက အကုန်အကျြံရေည် ြေစ်သည်။
(၃) အလုပ်သို့ သွားလာ ြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အန္တရာယ်ေျား
မေး။ ကျွန်ုပ်မနထိုင်မသာမနရာေှ အလုပ်သို့သွားရာတွင် မနက်ပိုင်း လူပည့်ကကပ်မနသည့် ေီးရထားြေင့် အလုပ်သွားရပပီး၊ အြားမရွးြျယ်ရန် နည်းလေ်းေရှိပါ။ ဤသိုေ့ီးရထားစီးြင်းြေင့် မရာဂါကူးစက်ြံရေည်ကို အရေ်းစိုးရိေ်ေပိ ါသည်။ သို့မသာ် ကျွန်ုပ်၏ကုေ္ပဏီေှာပုံေှန်အတိုင်းအလုပ်ြေွင့်ထားပပီး၊ထိေုီးရထားကိုဘဲစီးရန်ညွှန်ကကားထားပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်ထိအု မြ အမနအတိုင်းအလုပ်ဆက်သွားရေညလ်ား။
မ ြေ။ သငက် ို မရာဂါကူးစက်ေှုေှ ကာကွယရ် န် အလုပ်ေသွားနိုင်မကကာင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိတသာ အလုပ်သွားြျနိ ်ကို ပင်ဆင်မပး ရန်သို့ေဟုတ်တနအိေ်ေအှ လုပ်လုပ်ရန်အတွက်အစီအေံေျားလုပ်မဆာင်မပးရန်မတာင်းဆုပိါ။
သင်သည် ကုေ္ပဏီတွင် လုပ်ြလစာ အာေြံေှုဆိုင်ရာ အြျက်ေျား ရှ/ိ ေရှိ ကုေ္ပဏီ၏စည်းေျဉ်းစည်းကေ်းေျားကို ပန်လည် စစိ စသ် င့်သည်။ ြေျားနာေှုြံစားြွင့်ေျားကိုလည်း မလျှာက်ထားရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
(လိုအပ်ပါက) အလုပ်သေားနစ်နာမကကးကိုလည်းမလျှာက်ထားရန် စဉ်းစားသင့်သည်။
(၁) ြွင့်ရက်ကာလအတွင်း လုပ်ြလစာ
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်မဆးမသာအြါ မရာဂါရှိမကကာင်း အမြေထွက်ပါသည်။ ကုေ္ပဏီက ကျွန်ုပ်ကို အလုပ်သို့ ေလာရန်ညွှန်ကကားထားသည်။ထိုအမြအမနတွင်ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ြလစာကိုရရှပိါေညလ်ား။
မြေ။ မယဘုယျစည်းေျဉ်းအရ သင်၏ကုေ္ပဏီသည် လုပ်ခလစာတပးတချရန် တရားဝင်တာဝန်ေရှိမပ။ သို့မသာ် သင်အမနြေင့် ဉပတေအရ နာေကျန်းြွင့် မလျှာက်ထားနိုင်ြွင့် ရှ/ိ ေရှိ ကိုစစိ စ်ပါ။ နာေကျန်း အကျုးိ ြံစားြွင့် ရမကာင်းရရှနိ ိုင်သည်။
(က) လုပ်ငန်းြွင်ေှ မရာဂါကူးစက်ြံရ ြင်း
မေး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ြွင်တွင် မရာဂါကူးစက်ြံရပါက နစ်နာမကကးတစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိနိုင်ပါသလား။
မ ြေ။ အကယ်၍ သင်၏ မရာဂါကူးစက်ြံရေှုသည် လုပ်ငန်းြွင်ထိြိုက်ေှုအ ြေစ် သတ်ေှတ် ြင်းြံရလျှင် (သင်သည် ပည်သူ့ ၀နထ်ေ်းတစ်ဉီးြေစ်ပါကအေျားပည်သူဆိုင်ရာေမတာ်တဆေှု)၊သင့်ကျန်းောမရးမဆးကုသကုန်ကျစရိတ်နှင့်အလုပ် ပျက်ကွက်ေအှု တွက် နစ်နာမကကးရရှိမပလိေ့်ေည်။ သို့မသာ်လည်း အလုပ်သေားနစ်နာမကကးမလျှာက်ထားေှုေျားသည် အြျနိ်ကကာ ေင့်တတ်မသာမကကာင့် သင့်အမန ြေင့် ပထေဦးစွာ နာေကျန်းအကျုးိ ြံစားြွင့်ေျား ရရှိရန် စဉ်းစားသင့်သည်။
(ြ) အလုပ်သွားလာသည့်အြျနိ ်တွင် မရာဂါကူးစက်ြံရ ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် မဆးကုသြံမနရပပီး အလုပ်သို့ ေသွားရန်တားေစ်ြံထားရပါသည်။ ကျွန်ုပ် ဤမရာဂါ ကူးစက်ြံရ ြင်းေှာ အလုပ်သွားသည့်အြါ လူ ပည့်ကကပ်မနသည့် ေီးရထားကိုစီးရ ြင်းမကကာင့် ကူးစက်ြံရ ြင်း ြေစ်သည်ဟု ယကုံ ကည်ပါသည်။
မြေ။ သင်ကိစ္စရပ်သည် လုပ်ငန်းြွင် ေမတာ်တဆေှုအြေစ် သတ်ေှတ်ြင်းြံရနိုင်မသာ်လည်း ပထေဉီးစွာ နာေကျန်းအကျုးိ ြံစားြွင့်ေျားကို ရရှိရန် စဉ်းစားပါ။
(၃) ကိုဗစ်-၁၉ မရာဂါကူးစက်ြံရမသာ အလုပ်သေားေျား
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူစက်ြံထားရပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အလုပ်ရှင်ကိုမ ပာလိုက်ြျနိ ်တွင်၊ အလုပ်ရှင်က ကုေ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းေျားကိုရပ်နားရမတာ့ေည်။ပျက်စီးဆံးုရှုံးေှုေျားြေစ်မပါ်လာပါကကျွန်ုပ်ကအကုန်မပးမလျာ်ရေည်ဟုမပာလာသည်။ ထိုသို့လုပ်တောင်မှုမှာ ေှန်ကန်ပါသလား။
မ ြေ။ ကုေ္ပဏီ၏ဆုံးရှုံးေှုေျားကို သင့်အမန ြေင့်မပးမလျာ်ရန် တာဝန်ေရှိမပ။
၄။ နေအိမ်တွင်သာမနထိုင်ရန် ကုမ္ပဏီမှ ညွှန်ကကား ခင်း
သင်သည် ကုေ္ပဏီထံေှ လုပ်ြလစာအ ပည့်ကို မတာင်းြံသင့်သည်။
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် အဆက်ေ ပတ် မြျာင်းမတွဆိုးမနပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစကတ် န
ကျွန်ုပ်ကို မနအိေ်တွင်သာမနရန် ညွန်ကကားထားပပီး ေှာထားသည့်အတိုင်း မနအိေ်တွင်မနပါက ကျွန်ုပ်၏လစာကိုမပးေညလ် ား။ ထို့အ ပင် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းောမနမသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြံထားရမသာေိသားစုဝင်တစ်ဦးမကကာင့် ကျွန်ုပ်သည်အသွားအလာကန့်သတ်ေှုပုလုပ်ရန်လိုအပ်လာပါကကျွန်ုပ်၏လစာကိုရရှပိါေည်လား။
မြေ။တရားဥမေအရသင၏် ကုေ္ပဏီကသင့်ကိုအလုပ်သိေု့လာရန်ညွှန်ကကားထားပါကသင်၏လုပ်ြလစာအပည့်ကိုမပးရန် ၎င်းတို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။(ပေို့ပဥပမေပုေ်ေ ၅၃၆ အပိုေ် ၂)
ကိုဗစ်-၁၉ သည် သင်၏အလုပ်ရှင်က သင့်ကိုအလုပ်ထုတ်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်သမဘာတူစာြျုပ် သက်တေ်းတိုး ြင်းကို ငင်းဆိနု ိုင်မစရန်အတွက်အြွင့်အမရမပးထား ြင်း ေဟုတ်ပါ။
ကိုဗစ်-၁၉ မကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ေှုေျားသည် အကျုံးေဝင်မသာမကကာင့် တင်းကကပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်။
သင်သည် သင်၏အလုပ်ရှင်ထံတွင် အလုပ် ပန်ေလုပ်မသာ် ငားလည်း အလုပ်ေှထုတ်ပယ် ြင်း သို့ေဟုတ် သက်တေ်း တိုး ြင်းေျားနှင့် ပတ်သက်ပပီး ပပန်လည်ြုြံမ ပာဆိုနိုင်ပါသည်။
ကာလတိုအလုပ်ြန့်အပ်ေှုဆိုင်ရာသမဘာတူညီြျက်ေျားအတွက် ပိုေိုအမသးစိတ်သည့် ဥပမေဆိုင်ရာ စစ်မဆးေှုေျုးိ ပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ သင့်အမနြေင့် ဥပမေကျွေ်းကျင်သူေျားနှင့် တိုင်ပင်မဆွးမနွးရန် ကျွန်ုပ်တ့ို အကကံပုလိုပါ သည်။
(၁) သင် အလုပ်ထုတ်ြံရပါက
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် ပုံေှန်ဝန်ထေ်းတစ်ဦး(ကာလရှည်အလုပ်ြန့်အပ်ေ)ှု ြေင့် အလုပ်လုပ်ြဲ့သည်။ သို့မသာ် ကိုဗစ်မကကာင့် စးီ ပွားမရး အြက်အြဲေျား ြေစ်မပါ်လာမသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်ကို ကုေ္ပဏီေှ အလုပ်ထုတ်ြဲ့သည်။
မြေ။သင့်ကိုအမကကာင်းပြျက်ေရှိဘဲအလုပ်ေှေထုတ်ပယန် ိုင်ပါ။(အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျားအက်ဥပမေပုေ်ေ ၁၆)
(၂) ကာလတိုအလုပ်ြန့်အပ်ထားသည့် အလုပ်သေားတစ်ဦးအမန ြေင့် အလုပ်ထုတ် ြင်းြံရလျှင် မေး။ကျွန်ုပ်သည်ကာလရှည်ဝန်ထေ်းတစ်ဦးေဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်၏ကာလတိုအလုပ်ြန့်အပ်ေှုစာြျုပ်သက်တေ်းတုိးြင်းကို ၄ နှစ် ပုလုပ်ြဲ့ပပီး ြေစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ မကကာင့် ကုေ္ပဏီေှ ကျွန်ုပ်ကို အလုပ်ထုတ်လိုက်သည်။
မ ြေ။ သတ်ေှတ်ထားမသာ ကာလတိုစာြျုပ်သက်တေ်းတုးိ ြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်စည်းေျဉ်းေျားသည် သင်၏စာြျုပ်သက်တေ်း ကုန်ဆုံး ြင်းရှိ(အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေပုေ်ေ ၁၉)/ေရ(ှိ အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေပုေ်ေ ၁၇) အမပါ် ေူတည်၍ ကွဲ ပားေှုရှသိ ည်။ သင်သည် ဘယ်လိုအမ ြအမနေှာပင် ရှိမနပါမစ လက်ေမလျှာ့လိုက်ပါနှင့်။
(၃) အစုလိုက်အခပုံလုကိ ်ကို အလုပ်ထုတ် ြင်း မေး။နံနက်ြင်းအစည်းအမဝးတငွ်ေန်မနဂျာကကိုဗစ်-၁၉မကကာင့်၀န်ထေ်းေျားအားလးုံကိုအလုပ်ေထှုတ်ပယ်ေည်ဟု ရုတ်တရက်မပာကကားလကို်သည်။ကျွန်ုပ်ေည်သို့လပု်မဆာင်သင့်ပါသလဲ။
မ ြေ။ ဤသို့မသာအလုပ်ထုတ်ပယ်ေှုေျုးိ ကိုြွင့်ေ ပုပါ။
၆။ အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှုေျား ြေျက်သိေ်း ြင်း
အလုပ်ထုတ်ပယ် ြင်းေျားကဲ့သို့ပင် ကုေ္ပဏီေျားသည် အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှုေျားကိုလည်း ကကိုက်သလိုြေျက်သိေ်း၍ ေရပါ။
အစိုးရသည် ကိုဗစ်-၁၉မကကာင့် အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှု ြေျက်သိေ်း ြင်းေျားကို ကာကွယရ် န်အတွက် အဓိက စီးပွားမရး အြေွဲ့အစည်းေျားကို“အထူးအစအီစဉေ်ျားပုလုပ်မပးရန်”မတာင်းဆိုေှုပုလုပ်မနသည်။ထိုအမကကာင်းအရာကို သင်၏ကုေ္ပဏီအား အသိမပး၍ သင့်မတာ်မသာ စီစဉ်မဆာင်ရွက်ေှုေျား ပုလုပ်ရန် မတာင်းဆုပိ ါ။
မေး။ ကိုဗစ်-၁၉ ထိြိုက်သက်မရာက်ေှုေျားမကကာင့် ကုေ္ပဏီ၏ စီးပွားမရးမဆာင်ရွက်ေှုေျားကို မလျှာ့ြျေည်ြေစ်မသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှုကို ပယ်ြေျက်ေည် ြေစ်မကကာင်း အမကကာင်းကကားလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်အမန ြေင့် ေည်သည့်အရာေျား
မ ြေ။ အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှုြေျက်သိေ်း ြင်းသည် အလုပ်ထုတ်ြံရ ြင်းနှင့် အတူတူပင် ြေစ်သည်။ အလုပ်ြေျက်သိေ်း ြင်းသည် အလုပ ထုတ်ပယ်ြံရ ြင်းစံနှုန်းေျားကဲ့သို့ပင် ြေစ်သည်။ လုပ်ငန်းမလျှာ့ြျ ြင်းမကကာင့် အလုပ်ကေ်းလှေ်းေှု ြေျက်သိေ်း ြင်းသည် မသြျာမပါက်ေြေစ်နိုင်သည့်အရာြေစ်သည်။(အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျားအက်ဥပမေပုေ်ေ ၁၆)
ပထေဦးစွာ အလုပ်ေှ ယာယီြွင့်ရက်အ ြေစ် မတာင်းဆိုေှု သို့ေဟုတ် အလုပ်ထွက်ရန် မတာင်းဆိုေှုလားဆိုသည်ကို မသြျာစွာ ကွဲ ပားေှုရှိပါမစ။
သင့က် ို အလုပ်ေှနှုတ်ထွက်ပါဟုမ ပာဆိုြံရပါက သင့်ကိုအလုပ်ေှထုတပ် ယ်ေှု သို့ေဟုတ် အလုပ်ထွေက်ရန် အကကံ ပုေှု လား ေိုသည်ကို မသြျာစွာ သိရှိမစရန်လုပ်မဆာင်ပါ။
သင်သည် ဉပမေအရ ထိုသို့မသာမတာင်းဆုေိ ှုကို လက်ြံရန် ေလိုအပ်မပ။ သင့်အတနပြင့် လက်ြံြဲ့သည်ဆိုပါက စာြေင်မ့ ရးသားထားမသာအလုပ်ပန်လည်ြန့်အပ်ေည်ဆိုသည့်ကတိကဝတ်ကိုမတာင်းြံထားရေည်။
မေး။ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မနသည့် စက်ရုံသည် လုပ်ငန်းေျားကိုရပ်ဆိုင်းထားရေည်ြေစ်ပပီး၊ ယြုလက်ရှိအလုပ် ေရှိမသာ မကကာင့် ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ် ပန်ြေွင့်သည့်အထိမစာင့်ဆိုင်းရန် အလုပ်ရှင်ကမ ပာကကားလာသည်။ ထိုအမကကာင်းအရာနှင့် ပတ်သတ် ၍ ကျွန်ုပ်အမန ြေင့် ေည်သို့လုပ်မဆာင်သင့်သနည်း။
မ ြေ။ ပထေဦးစွာ သင်၏အလုပ်ရှင်သည် သင့က် ိုအလုပ်ေှနှုတ်ထွက်မစြျင်သလား သို့ေဟုတ် သင့်အားအလုပ်ေှ ယာယီြွင့်ယူ မစြျင်သလား ေိုသည်ကို မသြျာစွာမေး ေန်းပါ။
၈။ အြျနိ ်ပိုနှင့် အလုပ်ြျနိ်အဆေတန်လုပ်ရ ြင်း
အလုပ်ရှင်ေျားသည် ၎င်းတို့အလုပ်သေားေျား၏ မဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရးနှင့်လုံခြုံမရးကို တာဝန်ယူ မစာင့် မရှာက်ရန်နှင့် အဆေတန် လုပ်ရမသာ အလုပ်ြျနိ ်ကို မလျာ့ြျမပးရန် အထူးလိုအပ်သည်။ ယြုလက်ရှိ ြေစ်မပါ် မနသည့် ဆိုးရွားလှမသာ အြျနိ ်ကာလတွင် အလုပ်သေားေျား၏ အလုပ်ပောဏအမပါ် အထူးစဉ်းစား လုပ်မဆာင် မပးရန် လိုအပ်မပသည်။
တစ်ရက်အလုပ်ြျနိ်၈ နာရီနှင့် တစ်ပတ် ၄၀ နာရီ အလုပ်ြျနိ ်သည် အေျားဆုံး သတ်ေှတ်ထားသည့်စံနှုန်းေျား ြေစ် သည်။
သင၏် ကုေ္ပဏီတွင် အလုပ်သေားစီေံြန့်ြွဲေှုသမဘာတူညီြျက် ပုေ်ေ ၃၆ ရှ၊ိ ေရှိ ကို စစ်မဆးကကည့်ပါ။ ထိသု မဘာ တူညီြျက်အရ အလုပ်ြျနိ ်ကန့်သတ်ထား ြင်းရှိ၊ ေရှိကို (“အေျားဆးုံ အလုပ်ြျနိ ်နာရီ” “အထူးမြေါ် ပြျက်” ို့ ွေင် ရှာမြေွကကည့်ရှုနိုင်သည်
အလွန်ေျားမသာအလုပ်ြျနိ်ေျားကိုပငဆ်င်သုံးသပန်ိုင်ရန်အတွက်ဝန်ထေ်းတစ်ဦးေည်ေျှအလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်မစသည့် အလုပ်ြျနိ ်ကိုေှတ်ထားမသာ နည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးသင့်သည်။
မေး။ ကိုဗစ်-၁၉မကကာင့် ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ရသည့်အြျနိ်ပိုတိုးလာပါသည်။ ထိုအမ ြအမနေျုးိ တွင် ကျွန်ုပ်၏ ကျန်းောမရး အတွက် စိုးရိေ်မနရပါသည်။
မ ြေ။ သင်၏အလုပ်ြျနိ ်ကို ပု ပင်မ ပာငး် လဲမပးရန် မတာင်းဆိုပါ။ ကိုဗစ်-၁၉မကကာင့် သင်သည် အလုပ်ြျနိ ်တိုးပပီး အလုပ်လုပ် ကိုင်ရန် ေလိုအပ်ပါ၊ အလုပ်ပိုလုပ်ရ ြင်း ြေင့် သင်၏ကျန်းေားမရးကိုထိြိုက်နိုင်ပပီး အသက်ဆုံးေှုေျားပင် ြေစ်လာနိုင်သည် ကိုလည်း စိုးရိေ်ရေည် ြေစ်သည်။ (အလုပ်သေားစံနှုန်းေျားဥပမေပုေ်ေ ၃၆၊ အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေ ပုေ်ေ ၅)
သင်သည် ကုေ္ပဏီထံကအလုပ်သေားစံနနှု ်းေျား ဥပမေက မြော်ပထားြျက်အရ လုပ်ခလစာပြင့် အနားယူရသည့် နှစ်ပတ်လည်အားလပ်ရက်ေဟုတ်မသာလုပ်ြလစာြေင့်သီးြားအထူးအားလပ်ရက်ကိုမတာင်းြရံ ေည်ြေစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် သီး ြားအထူးြွင့်ရက်ေရှိပါက သင်၏ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ြလစာ ြေင့် အားလပ်ရက်ြွင့်ကို ဆက်လက်အသုံး ပုနိုင်သည်။
သင်အမန ြေင့် အလုပ်ေသွားရန်ဆုံး ြေတ်ထားလျှင် အလုပ်ေသွားရသည့်အမကကာင်းအရင်းေျားကို မြော် ပရေည်။
ကိုဗစ်-၁၉မကကာင့် မကျာင်းပိတ်ထားသည့်အတွက် သင့်ကမလးကို ပုစုမစာင့်မရှာက်ရန်အတွက် သင်အလုပ် ပျက်ကွက်ရ ြင်းမကကာင့် သင့်ကိုအလုပ်ေှထုတ်ပယ် ြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်သက်တေ်းတုးိ မပးေှုေရှိ ြင်းေျား ပုလုပ် ြင်းသည် တရားေဝင်ပါ။
(၁) တစ်နိုင်ငံလုံးမကျာင်းေျားပိတထ် ား ြင်းမကကာင့် ကမလးမစာင့်မရှာက်သူေျား အလုပ်ေှ ြွင့်ယူ ြင်း
မေး။ ေူလတန်းမကျာင်းေျားပိတ်သွားမသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်သည် ကမလးကိုမစာင့်မရှာက်မပးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအ ွေက် ကျွန်ုပ်သည် ြွင့်ယူလုိ့ရနိုင်ပါသလား။
မ ြေ။ မကျာင်းပိတ် ြင်းမကကာင့် မိဘများအ ွေက် အထူးြွင့်ရက်ကို သင့်အမန ြေင့် မတာင်းြသံ င့်သည်။
(၂) အလုပ်ပျက်ကွက် ြင်းမကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ် ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်၏ ကုေ္ပဏီက အထူးြွင့်ရက်ကို ြွင့်ေ ပုပါ။ ကျွန်ုပ်ကမလး မနေမကာင်း ြေစ်ြဲ့စဉ်က နှစ်ပတ်လည် အားလပ်ရက် ြွင့်ေျားကို အကုန်ယြူ ဲ့ပပီး ြေစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ေူလတန်းမကျာင်းေျား ပိတ်သွား ြင်းမကကာင့် ကမလးကို ပုစုမစာင့်မရှာက် ရန်အတွက် အလုပ်ပျက်ရုံေှအပ အ ြားမရွးြျယ်စရာ ေရှိမတာ့ပါ။ ထိသု ို့အလုပ်ပျက် ြင်းမကကာင့် အလုပ်ထုတ်ြံရနိုင်ပါသလား။
မ ြေ။ တစ်နိုင်ငံလုံးေူလတန်းမကျာင်းေျား ပိတ်သွားမသာမကကာင့် သင်၏ကမလးကို ပုစုမစာင့်မရှာက်ရန် လိုအပ်ပပီး အလုပ်ပျက် ကွက်ရေည် ြေစ်မကကာင်းကို သင့်ကုေ္ပဏီအား ကကိုတင်မ ပာ ပထားသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့မသာ အမ ြအမနမကကာင့် အလုပ် ထုတ်ပယ် ြင်းသည် တရားေဝင်မကကာင်း သတ်ေှတ်ထားသည်။ (အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေ ပုေ်ေ ၁၆)
(၃) ကိုယ်ဝန်မဆာင် အလုပ်သေားေျား မေး။ကျွန်ုပ်သည်ပုံေှန်အားြေင့်အလုပ်ကိုေီးရထားြေင့်သွားသည်။ကျွန်ုပ်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိမနသည့်အတွက်မရာဂါကူးစကေ် ှုကို ကာကွယရ် န် ရုံးသိေု့ သွားြျင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ကုေ္ပဏီထံသို့ အလုပ်ပျက်ြွင့်မတာင်းရာတွင်၊ ကုေ္ပဏီက ကျွန်ုပ်အလုပ်သို့ ေလာပါက အလုပ်ထုတ်ေည်ဟုမ ပာပါသည်။ ကျွန်ုပ် မည်သို့ လုပ်မဆာင်သင့်ပါသလဲ။
မြေ။အထက်မြော်ပပါအမြအမနမကကာင့်သင်အလုပ်ပျက်ကွက်ရသည်ဆိုပါက၊သင့်အမနြေင့်ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်ေေှုှ မရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက် အလုပ်ပျက်ကွက်ရေည် ြေစ်မကကာင်း ကုေ္ပဏီအားမ ပာ ပရေည်။ (သာတူညီေျှ အလုပ်ြန့်ထားေှုမရး အက်ှှုဥပမေ ပုေ်ေ ၁၃၊ အပိုေ် ၂ ကိုကကည့်ပါ)။ အထက်ပါအမ ြအမနမကကာင့် ကုေ္ပဏီက သင့က် ို အလုပ်ထုတ်ြွင့်ေရှိပါ။
၁၀။ လုပ်ငန်းြွင်သို့ သွားရသည့်အြျနိ ်မ ပာင်းလဲ ြင်းနှင့်နေအိေ်ေအှ လုပ်လုပ် ြင်း
မယဘုယျစည်းေျဉ်းစည်းကေ်းေျားအရ ကုေ္ပဏီေျားသည် အလုပ်သေားေျား၏ သမဘာတူညီြျက်ေရဘဲ အလုပ် သွားရသည့်အြျနိ ်မ ပာင်းလဲသတ်ေှတ်ေှုကို တစ်ြေက်သတ် ညွန်ကကား၍ ေရပါ။
အလုပ်သေားေျားအမန ြေင့် ပုံေှန်အြျနိ ်ေဟုတ်သည့် အလုပ်သွားြျနိ ်ကို မ ပာင်းလဲမပးရန် မတာင်းဆိုလာပါက၊ ကုေ္ပဏီအမန ြေင့် အလုပ်သားေျား၏ မဘးကငး် လုံခြုံေှုကို ငဲ့ညှာ ြင်းအား ြေင့် ထိုမတာင်းဆိုေှုကို လိုအပ်သလို စီစဉ် မပးရေည် ြေစ်သည်။
မယဘုယျစည်းေျဉ်းစည်းကေ်းေျားအရ ကုေ္ပဏီသည် အပေဲတေ်းအလုပ်သေားေျားအတွက် ပုံေှန်အလုပ်သွားြျနိ် မပာင်းလဲြင်းကို ြွင့်ပုမပးပါက အပေဲတေ်းေဟုတ်သည့် အလုပ်သေားေျားက ထိုကဲ့သို့မသာ အလုပ်သွားြျနိ်ကို မတာင်းဆိုလာပါက ငင်းဆိုြွင့်ေရှိပါ။
ကုေ္ပဏီေှ သင့်အား မနအိေ်ေှအလုပ်လုပ်စဉ်ကာလအတွင်း အြျနိ ်ပိုအလုပ်လုပ်ရန် ညွှန်ကကားြျက်ေျားမပးလာြဲ့ပါက ကုေ္ပဏီက သင့်ကို အြျနိ ်ပိုမကကးမပးရေည် ြေစ်ပပီး၊ ICT ပစ္စည်းများေှတစ်ဆင့် အြျနိ ်ေမရွးဝင်မရာက် အသုံး ပုနိုင် ရေည် ြေစ်သည်။
၁) ပုံေှန်အြျနိ ်ေဟုတ်ဘဲ မ ပာင်းလဲသွားသည့် အလုပ်သွားြျနိ ်
က) ပုံေှန်အြျနိ ်ေဟုတ်ဘဲ အလုပ်အသွားအ ပန်အြျနိ်မ ပာင်းလဲရန် တြေက်သတ်ညွှန်ကကား ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်၏ ကုေ္ပဏီက ပုံေှန်အလုပ်သွားြျနိ ်ေဟုတ်သည့် အလုပ်အသွားအပန်အြျနိ ်ဇယားကို မပာင်းလဲရန် ညွှန်ကကားလာပါသည်။ ထိညု ွှန်ကကားြျက်မကကာင့် ကျွန်ုပ်၏အလုပ်လုပ်ြျနိ ်သည် ပုံေှန် ေနက် (၉နာရီ - ညမန ၆နာရီ) ေှ (ေနက် ၁၁နာရီ- ည ၈ နာရီ) သို့မ ပာင်းလဲသွားပပီး ညဘက်အိေ် ပန်မနာက်ကျလွန်း ြင်းမကကာင့် အလွန်ပငပ် န်းလနွ ်းပါသည်။
မြေ။ အလုပ်စြျနိ ်နှင့် အလုပ်ပပီးြျနိ ်သည် သင်၏အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်နှင့် သက်ဆိုင်မသာအရာြေစ်သည်၊ ထို့မကကာင့် မပာင်းလေဲ ှုေျားပုလုပ်ရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ြေက်လုံး၏ သမဘာတူညီြျက်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ကုေ္ပဏီသည် အလုပ်ြျနိ ်ေျားကို တြေက်သတ် ဆုးံ ြေတမ် ပာင်းလဲ ြင်း ေလုပ်ရပါ။ (အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျား အက်ဥပမေ ပုေ်ေ ၈)
ြ) ပုံမှန်အလုပ်သွေားချနိ ်မဟု ်သည့် အလုပ်အသွေားအပပန် အချနိ ်တပပာင်းလဲရန် ကုေ္ပဏီက ငင်းဆန် ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်အမနြေင့် လူပည့်ကကပ်သည့်ရထားြေင့် အလုပ်သွားရြင်းမကကာင့် မရာဂါပိုးကူစက်ေည်ကို စိုးရိေ်မသာမကကာင့်၊ အလုပ်သွားသည့်အြျနိ ်နာရီကို တပပာင်းလဲတပးရန် မတာင်းဆိုြဲ့မသာ်လည်း ကုေ္ပဏီက ြွင့်ေ ပုပါ။ ကျွန်ုပ် ေည်သို့ လုပ်မဆာင် သင့်ပါသလဲ။
မ ြေ။ သင်အမန ြေင့် ပုံေှန်အလုပ်သွားြျနိ်မ ပာင်းလဲမပး ြင်းသည် မရာဂါကူးစကေ် ကှု ို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်အမရးကကီး သည်ဟုကုေ္ပဏီအားမပာပရေည်။(အလုပ်အကိုင်စာြျုပ်ေျားအက်ဥပမေပုေ်ေ ၅)
ဂ)အပေဲတေ်းအလုပ်သေား ေဟုတ်သူေျားအတွက် အလုပ်အသွားအ ပန်အြျနိ ်
မေး။ ကျွန်ုပ်၏ လုပ်ငန်းြွင်၌ အပေဲတေ်းအလုပ်သေားေျားအတွက် အလုပ်အသွားအပန်အြျနိ ်ကို ြွင့်ပုမပးထားမသာ်လည်း ကျွန်ုပ်အပါအဝင် အပေဲတေ်းအလုပ်သေားေဟုတ်သူေျားအတွက်ကိုေူ ြွင့် ပု ေထားပါ။
မ ြေ။ အပေဲတေ်း အလုပ်သေားေဟုတ်သူေျားအတွက် တူညီေှုေရှိမသာ ဆက်ဆံေှုေျားကိုေပုလုပ်ရပါ။ သင့်အမန ြေင့် အလုပ် အသွားအ ပန်အြျနိ ်မ ပာင်းလဲေှုကို အပေဲတေ်းအလုပ်သေားေဟုတ်သူေျားအတွက်လည်း ပုလုပ်မပးရန် မတာင်းဆိုသင့်သည်။ (တိုးတက်ေှုဆိုင်ရာဥပမေ၊ အြျနိ ်ပိုင်းအလုပ်သေားေျားအတွက် အလုပ်အကိုင်စီေံြန့်ြွဲေှုဥပမေ အပိုေ် ၈ နှင့် ၉)။
(၂) တနအိေ်ေှ အလုပ်လုပ် ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်ကိကု ုေ္ပဏီက မနအိေ်ေှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ညွှန်ကကားထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် စ်ရက် ွေင် အနည်းေုံး ၁၀ နာရီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမသာ်လည်း လုပ်အားြ ၈နာရီ အတွက်သာရရှိပါသည်။
မ ြေ။ ကုေ္ပဏီအမန ြေင့် သင့်ကိုလုပ်အားြ ၁၀ နာရီအတွက် မပးသင့်ပါသည်။
သင်၏ အလုပ်ရှင်သည် ဝယ်မနကျမြောက်သည်ေျားက အလုပ်သေားေျားအမပါ် မစာ်ကားမနှာင့်ယှက်ေှုတစ်စုံတစ်ရာ ပုလုပ်ြဲ့ပါ ကိုင်တွယ်မ ြေရှင်းမပးရန် လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝယ်မနကျမြောက်သည်တစ်ဦး၏ မစာ်ကား မနှာင့်ယှက်ေှုကိုြံရလျှင် သင်၏ကုေ္ပဏီ သို့ေဟုတ် အလုပ်သေားသေဂ္ဂတနို့ ှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ မရာဂါအေျားဆုံးကူးစက်ြံရသည့်နိုင်ငံေျား သို့ေဟုတ် မနရာေျားတွင် မနထိုင်မသာ သူေျားကို ြွဲြား ဆက်ဆံရန် ြွင့်ေ ပုပါ။
(၁) မစျးဝယ်သူေျား၏ မနှာက်ယှက် ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် မဆးဆိုင်တစ်ြုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်။ မန့စဉ် နှာမြါင်းစည်းဝယ်ယူရန် မေးလာမသာ ြေုန်းေျားကို လက်ြံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် နှာမြါင်းစည်းများ ဆိုင်၏စမတာ့ထဲ ဘယ်အြျနိ ်မရာက်ေည်ကို ေသိမသးပါဟု မ ြေလိုက်တိုင်း အမအာ်ြံရတယ်။ ဤကဲ့သို့ အမအာ်ြံမနရသည်ေှာ နှစ်ပတ်မလာက်ရှိပပီ ြေစ်ပပီး၊ စိတ်ပင်ပန်းမနပပီ ြေစ်သည်။ ကျွန်ုပ် ေည်သိလု့ုပ်မဆာင်သင့်ပါသလဲ။
မ ြေ။ သင်၏ကုေ္ပဏီကို အန္တရာယ်ရှိမသာေမကျနပ်ြျက်ေျားအား တုံ့ ပန်အမရးယူေှုေျား ပုလုပ်ရန် မတာင်းဆိုသင့်သည်။ (အလုပ်သမားမူဝါေအား ဘက်တပါင်းစုံပမှင့် င်တရးဉပတေအရ လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း တြေက်သတ်လုပ်ငန်းြွင် ဆက်ဆံမရး အမ ြအမနမကကာင့် နှုတ်အား ြေင့်မသာ်လည်းမကာင်း၊ လုပ်ရပ်အား ြေင့်မသာ်လည်းမကာင်း ြေစ်မပါ်လာမသာ ပဿနာေျားကို အလုပ်သေားစီေံြန့်ြွဲမရးအရ အလုပ်ရှင်က ေည်သို့မ ြေရှင်းသင့်မကကာင်းကို မြေါ် ပထားမသာ လေ်းညွှန်ြျက်ေျားတွင် ကကည့်ရှုနိုင်သည်။ (Reiwa year2ကျန်းောမရး၊ အလုပ်သေားနှင့် လူေှုြေူလုံမရးဝန်ကကီးဌာန၊ ညွန်ကကားြျက် အေှတ် ၅))
(၂) နိုင်ငံ ြားသားေျားအမပါ် မစာ်ကားမနှာင့်ယှက် ြင်း
မေး။ ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံရပ် ြားက ြေစ်သည်။ ကျွန်ုပ၏် မေွးရပ်ဇာတိနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာေျားစွာရှိမနမသာမကကာင့် ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်ြွင်တွင် မစာ်ကားမနှာင့်ယှက် ြင်းနှင့် ြွဲ ြားဆက်ဆံ ြင်းကို ြံရပါသည်။ ကျွန်ုပ် ေည်သို့ လုပ်မဆာင်သင့် ပါသလဲ။
မ ြေ။ ထိုကဲ့သို့မသာ ြွဲ ြားဆက်ဆံေှုေျုးိ ကို ပမပျာက်သွားမစရန်အ ွေက် တပြရှင်းတပးရန် သင်၏ကုေ္ပဏီထံ မတာင်းဆိုသင့် သည်။ (လူေှုြေူလုံမရးစံနှုန်းေျားဥပမေ အပိုေ် ၃)
၁၂။တဆင့်ခံစေစ်ဖြင့်အလုြ်ခေ့်ထားဖခင်း(မှ ်ချက်။အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ကိုအလုပ်ရှင်နှင့် ိုက်ရိုက်ချုပ်ေိုပခင်းမဟု ်ဘဲ အလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းရှင်များကိုယ်စားတောင်ရွက်တပးတသာ ကုမ္ပဏီပြင့် စာချုပ်ချုပ်ေို လုပ်ကိုင်ရပခင်းကိုေိုလိုသည်။)
သင်၏ ေင့်ခံစနစ်ပြင့် ကာလ ိုအလုပ်ြန့်ထားသည့် ကာလအတွင်း သင့်ကိုအလုပ်ေှထုတ်ပယ်လျှင်၊ သင၏် စာြျုပ်သက်တေ်းကုန်ဆုံးြျနိ ်အထိ တဆင့်ြံအလုပ်ြန့်ထားသူထံေှ သင်ရရှိေည့် လုပ်ြလစာကို မတာင်းဆိုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ ကာလ ိုအလုပ်အကိုင်စာချုပ် သက်တေ်းကုန်ဆုံးသွားပပီး စာြျုပ်ကို သက်တေ်းတုးိမပးြင်း ေရှိပါက သက်တေ်းတုိးရန်အတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမဆွးမနွးေှုကို ပုလုပ်ရေည်။ သင၏် အလုပ်ကိုပုံမှန်ေက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အ ွေက် တ ာင်းေိုပါ။
ေင့်ခံစနစ်ပြင့်ကာလ ိုအလုပ်အကိုင်သတဘာ ူစာချုပ်ပြင့်လုပ်ကိုင်ရတသာအလုပ်သမားများသည်အမမဲ မ်း အလုပ်သမားများနှင့် မ ူညီကွေဲပပားသည့် အလုပ်အကိုင်ေိုင်ရာ သ ်မှ ်ချက်များ ပပုပပငတ်ပပာငး်လဲတပးရန် တ ာင်းေိုခွေင့်ရှိသည်။
(၁)စာချုပ်သက် မ်းကာလအလယ်ပိုင်း ွေင်အလုပ်ထု ်ပယ်ပခင်း
တမး။ကျွန်ုပ်သည် ေင့်ခံစနစ်ပြင့်ကာလ ိုအလုပ်ခန့်ထားမှုသတဘာ ူစာချုပ်ကာလအလယ်ပိုင်း ွေင်ကိုဗစ်-၁၉တကာင့် ကျွန်ုပ်ကို အလုပ်ထု ်ခံရမည်ဟု တပပာ ကားလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝင်တငွေကို လုံး၀ ေုံးရှုံးသွေားနိုင်ပါသလား။
တပြ။ သင်၏ စာချုပ်ခကာလမပီးေုံးသည့် အချနိ အ် ထိ ရသင့်သည့်သင်၏လုပ်ခလစာကို တ ာင်းေိုနိုင်ပါသည်။ (အလုပ်အကိုင် စာချုပ်များ အက်ဥပတေ ပုေ်မ ၁၇၊ အပိုေ် ၁)
(၂)သက် မ်း ိုးမတပးပခင်း
တမး။ကိုဗစ်-၁၉တကာင့်၊ကျွန်ုပ်၏စာချုပ်သက် မ်းကုန်ေုံးသွေားသည့်အခါသက် မ်းထပ် ိုးမတပးတ ာ့တကာင်းတပပာကား လာပါသည်။ ကျွန်ုပ် မည်သို့ လုပ်တောင်သင့်ပါသလဲ။
တပြ။ သင်၏ ေင့်ခံအလုပ်ခန့်ထားသူနှင့် သင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရတသာ လုပ်ငန်း ိကု့ ို အလုပ်ခန့်ထားတရးစာချုပ် သက် မ်း ိုးတပးရန်အ ွေက် ညိှနှိုင်းတေွေးတနွေးသင့်သည်။ သင်၏ ေင့်ခံအလုပ်ခန့်ထားသူကို အလုပ်အကိုင် ည်မမဲတရးေိုင်ရာ အစီအမံများကိုလုပ်တောင်တပးရန်တာင်းေပိုါ။(အလုပ်သမားများေင့်ခံစနစ်ပြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပခင်းေိုင်ရာဥပတေ
(၃)အမမဲ မ်းအလုပ်သမားများနှင့်မ ူကွေဲပပားသည့်အလုပ်အကိုင်ေိုင်ရာသ ်မှ ်ချက်များ
တမး။ ေင့်ခံစနစ်ပြင့် ကာလ ိုသက် မ်းအလုပ်သမားများသည် အမမဲ မ်းအလုပ်သမားများကဲ့သို့ နိုင်ငံအဝှမ်း တကျာင်းများပိ ်သွေားတသာတကာင့်၎င်း ိ့၏ု ကတလးကိုကည့်ရှုတစာင့်တရှာက်ရန်အထူးခွေင့်ရက်ယူခွေင့်မရှိပါ။
တပြ။အလုပ်အကိုင်ေိုင်ရာသ ်မှ ်ချက်များသည်သီးပခားအတပခအတနများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါကမ ူညီသည့်အလုပ်အကိုင် ေိုင်ရာသ ်မှ ်ချက်များကိုပပန်လည်ပပုပပင်ခွေင့်ရှိပါသည်။(အလုပ်သမားများ ေင့်ခံစနစ်ပြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပခင်းေိုင်ရာ ဥပတေ ပုေ်မ ၃၀၊ အပိုေ် ၃)
အြျနိ ်ပည့် သို့ေဟုတ် အြျနိ ်ပိုင်း နိုင်ငံမတာ်အဆင့် အစိုးရဝန်ထေ်းေျား (ပုံေှန်ဝန်မဆာင်ေှုေျား)သည် အြျု့ိ ကိစ္စရပ်ေျားတွင် အထူးြွင့်ရက် ရယူနိုင်သည်။
မေသန္တရ အစိုးရဝန်ထေ်းေျား(ပုံေှန်ဝန်မဆာင်ေှု)သည် နိုင်ငံမတာ်အဆင့် အစိုးရဝန်ထေ်းေျား ြံစားရမသာ အထူး ြွင့်ရက် ြံစားြွင့်ကိုရရှိမစရန် ပည်ထဲမရးနှင့် ဆက်သွယ်မရးဝန်ကကီးဌာနက မေသန္တရအစိုးရဌာနေျားထံသို့ နိုင်ငံမတာ်အဆင့်အစိုးရဝန်ထေ်းေျား (ပုံေှန်ဝန်မဆာင်ေှုေျား) ြံစားရမသာ အထူးြွင့်ရက်စံြျနိ ်စံညွှန်းေျားကို မေသန္တရအစိုးရဝန်ထေ်းေျားအတွက် သင့်မလျာ်သလို မဆာင်ရွက်မပးရန် မတာင်းဆုိထားြျက်အမပါ် အမ ြြံ၍ မေသန္တရ ပည်သူ့ဝန်ထေ်းေျား (ပုံေှန် ဝန်မဆာင်ေှုေျား) က မတာင်းဆုိသင့်သည်။
စာသင်တကျာင်းဝန်ထမ်းများသည် ပညာတရး အနုပညာ၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကကီးဌာနက ထုတ် ပန်ထား မသာ “ကိုဗစ်-၁၉နှင့်ပတ်သက်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ေူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်နှင့် အထူးပညာမရး မကျာင်းေျားကိုယာယီရပ်ဆိုင်း ြင်းဆိုင်ရာ မေးြွန်းနှင့်အမ ြေေျား” ကို အမ ြြံ၍ မတာင်းဆုိသင့်သည်။
(၁) နိုင်ငံတ ာ်အေင့်အစိုးရဝန်ထမ်းများ (ပုံမှန် ဝန်တောင်မှု)
က) အချနိ ်ပပည့်
တမး။ ကျွန်ုပ်သည် အချနိ ်ပပည့် နိုင်ငံတ ာ်အေင့်ပပည့်သူ့ဝန်ထမ်း(ပုံမှန်ဝန်တောင်မှု) စ်ဉီး ပြစ်တသာ်လည်း ကျွန်ုပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိလာသည့်အခါ သို့မဟု်အကယ်၍ တကျာင်းများပိ ်ထားတသာတ ကာင့် ကျွန်ုပ်၏ ကတလးအား တနအိမ် ွေင်တစာင့်တရှာက်ရန်လိုအပ်ပါက လုပ်ခလစာပြင့် ခွေင့်ရက် ရရှနိ ိုင်ပါသလား။
တပြ။ အချု့ိ မသာအမ ြအမနေျားတွင် သင်သည် လုပ်ြလစာ ရသည့်ြွင့်ရက်များကို ရယူြွင့်ရှိသည်။
ခ) အချနိ ်ပိုင်း အလုပ်သမား
တမး။ ကျွန်ုပ်သည် အချနိ ်ပိုင်း ပပည်သူ့ဝန်ထမ်းအလုပ်သမား (ပုံမှန်ဝန်တောင်မှု) စ်ဦးပြစ်တသာ်လည်း လုပ်ြလစာရသည့် ြွင့်ရက် ရရှနိ ိုင်ပါသလား။
တပြ။ သင်သည် လုပ်ခလစာရသည့် ခွေင့်ရက်ကို အချနိ ်ပပည့်အလုပ်သမားများကဲ့သို့ ရရှိသင့်ပါသည်။
(၂) တေသန္တရအစိုးရဝန်ထမ်း (ပုံမှန် ဝန်တောင်မှု)
တမး။ ကျွန်ုပ်သည် အချနိ ်ပပည့် တေသန္တရပပည့်သူ့ဝန်ထမ်း(ပုံမှန်ဝန်တောင်မှု) စ်ဉီး ပြစ်တသာ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသည့်အခါ သို့မဟု်အကယ်၍ တကျာင်းများပိ ်ထားတသာတကာင့် ကျွန်ုပ်၏ကတလးအား တနအိမ် ွေင် တစာင့်တရှာက်ရန်လိုအပ်ပါက လုပ်ခလစာပြင့် ခွေင့်ရက် ရရှနိ ိုင်ပါသလား။
တပြ။ ပည်ထဲမရးနှင့်ဆက်သွယ်မရး၀န်ကကီးဌာန၏ ထုတ် ပန်ြျက်အရ တေသန္တရအစိုးရဌာနများသည် နိုင်ငံမတာ်အဆင့် ပည်သူ့၀န်ထေ်းေျား (ပုံေှန် ၀န်မဆာင်ေှု) ြံစားရမသာ အထူးြွင့်ရက် စံြျနိ ်စံညွှန်းေျားကို မေသန္တရ ပည်သူ့၀န်ထေ်းေျား (ပုံေှန်၀န်မဆာင်ေှု) အတွက် သင့်မလျာ်သလို ကျင့်သုံးမပးရန် မတာင်းဆိုထားပခင်းတကာင့် သင်သည် နိုင်ငံတ ာ်အေင့်
ပပည်သူ့၀န်ထေ်းေျား၏ စံြျနိ ်စံညွှန်းေျားနှင့်အညီ လုပ်ခလစာရတသာ ခွေင့်ရက်များကို တ ာင်းေိုသင့်သည်။
ခ) အချနိ ်ပိုင်း
တမး။ ကျွန်ုပ်သည် အချနိ ်ပိုင်း တေသန္တရ အစိုးရဝန်ထမ်း (ပုံမှန် ဝန်တောင်မှု) စ်ဦးပြစ်တသာ်လည်း လုပ်ခလစာရတသာ ခွေင့်ရက်များကို ရယူြွင့်ရှိပါသလား။
တပြ။ သင်၏ လုပ်ခလစာရတသာ ခွေင့်ရကများသည် အချနိ ်ပပည့်အလုပ်သမားများနှင့် န်း ူပြစ်ရပါမည်။
က) ေရာ/ေရာမများအ ွေက် အလုပ်ချနိ ်
တမး။ ကျွန်ုပ်သည် အစိုးရတကျာင်းမှ ေရာ စ်ဦးပြစ်သည်။ ယခု ွေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပပန့်ပွေားမှု ကာကွေယ်ရန် တကျာင်းများ ပိ ်ထားတသာ်လည်းကျွန်ုပ်သည်စာသင်ချနိ်အမပီး ာဝန်များထမ်းတောင်တနရသည်။တကျာင်းပိ ်သွေားတသာ်လည်းကျွန်ုပ် လုပ်တောင်ရမည့် အလုပ်များရှိတနသည့်အပပင် ယခတု ကျာင်းချနိ ်အမပီး ာဝန်များ ထပ် ိုးလုပ်တောင်တနရမပီး ကျွန်ုပ်၏ အလုပ်ချနိ ်သည်လည်း ပုံမှန်ထက်ပိုများလာတသာတ ကာင့် တကျာင်းချနိ ်အမပီး ာဝန်များကို အချနိ ်ပိုအပြင့် တကျာင်းက သ ်မှ်တပးနိုင်ပါသလား။
တပြ။ တကျာင်းသည် တကျာင်းချနိ ်တနာက်ပိုင်း ာဝန်များကို အချနိ ်ပိုအပြင့် သ ်မှ ်ခွေင့် မရှိပါ။ အကယ်၍ လက်ရှိအလုပ်ချနိ်သည်ထပ်တိုးအလုပ်ကိုလက်ြံရန်လုံမလာက်ေှုေရှိပါကမကျာင်းအမနြေင့်၀နထ်ေ်းေျားတုးိေှင့်ြန့်ထားြင်းတို့ကို လုပ်တောင်သွေားရမည်ပြစ်သည်။
ခ)အလုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းတသာမတ ာ် ေမှု
တမး။ကျွန်ုပ်သည် အစိုးရတကျာင်းမှေရာ စ်ဦးပြစ်သည်။ ယခု ွေင် ကိုဗစ်-၁၉တကာင့် တကျာင်းများပိ ်ထားတသာ်လည်း တကျာင်းချနိ်တနာက်ပိုင်း ာဝန်များကိုလုပ်တောင်တနစဉ်ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်အတနပြင့်နစ်နာတကး စုံ စ်ရာ ရနိုင်ပါသလား။
တပြ။သင်သည်အလုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မတ ာ် ေမှုပြစ်တသာတကာင့်တေးဝါးကုသမှုေိုင်ရာနစ်နာတကးကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်သည် မကျာင်း၏ မဘးကင်းလုံခြုံမရးဆိုင်ရာ အစီအေံေျား ကင်းေဲ့ြင်းမကကာင့် ထိြိုက်ေဏ်ရာ ရရှိသည်ဆိုပါက သင်အတနပြင့်နိုင်ငံမတာ်၏နစ်နာေှုကုစားမရးဥပမေပုေ်ေ၁အရပျက်စီးဆံးုရှုံးေှုေျားအ ွေက်တ ာင်းေုနိ ိုင်သည်။
ဂ) အချနိ ်ပိုင်းဌာနများ၏ လုပ်ခလစာ
တမး။ ကျွန်ုပ်သည်မကျာင်း၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်မနသည့် အြျနိ ်ပိုင်းမကျာင်းဆရာ/ အမစာင့် / မကျာင်းစားမသာက်ဆိုင်အတွက် ြျက်ပုတ်သူြေစ်သည်။ကိုဗစ်-၁၉ပပန့်ပွေားမှုကိုကာကွေယ်ရန်တကျာင်းများပိ ်ထားသပြင့်ကျွန်ုပ်၏ဝင်တငွေေုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။ တပြ။သင်သည်ပညာတရးဘု ်အြွေဲ့နှင့်အုပ်ချုပ်တရးမှူး ိုအ့ ားသင့်အားအလုပ်ေက်လုပ်ခွေင့်တပးရန်နှင့်အလုပ်ပိ ်ထားစဉ် အ ွေင်း သင့်အားလစာတပးရန် တ ာင်းေိုသင့်သည်။
၁၄။ အလွတ်တေ်းအလုြ် (Freelance work)
သင်သည် အလုပ်ြေျက်သိေ်းေနှု ှင့် ပတ်သက်၍ ၀န်မဆာင်ေှုရယူသူနှင့် သင်ပုလုပ်ြဲ့သည့်အစီအစဉ်ေျားကို (သင်၏ အလုပ်ြန့်ထားမရးသမဘာတူစာြျုပ်နှင့်/ သို့ေဟုတ် အီးမေးလ်နှင့်ဆက်သွယ်မရးေျားတွင)် ပန်လည်စစ်မဆးပါ။
သီးပခားအလွေ်န်းကန်ထရိုက် ာများ/ အလွေ်န်းအလုပ်လုပ်သူများသည် ချုပ်ေိုထားတသာ အလုပ်အကိုင် ေိုင်ရာ သတဘာ ူညီချက်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တပပာင်းလဲလိုသည့်အခါ ဝန်တောင်မှုရယူသူများသည် သီးပခားအလွေ်န်းကန်ထရိုက် ာများ/ အလွေ်န်းအလုပ်လုပ်သမူ ျားနှင့် ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ခလစာနှင့် တငွေတပး တခ ျ ရန်တန ့စ ွေဲ စ သည့် ို အပါ အဝ င် သ တဘာ ူညီခ ျက်မျ ား က ို စ ာပြင့် တရ းသာ းတြါ် ပပပခင်းသို့မ ဟု်အ ပခ ား ရှင်းလင်းတသာ ပုံစံများပြင့် လုပ်တောင်ရန် အစိုးရက ညွှန်ကားထားပါသည်။ ထိုအချက်ကို တငွေတ ာင်းခံပခင်း ပပုလုပ်သည့်အခါ ိုင်းအ ွေက်မှ ်သားထားရမည်။
အလွေ်န်းအလုပ်လုပ်သူများအ ွေက်အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမှုအစီအမံများ(တကျာင်းပိ ်ပခင်းတကာင့်ေိုင်းငံ့ထားရသည့် စီးပွေားတရးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင်) ရှိပါသည်။ သင့်အတနပြင့် အကျုးံ ဝင်ခံစားခွေင့် ရှိတကာင်းရှိနိုင်ပါသည်။